धर्मनिरपेक्षता विदेशीको चाल : कमल थापा - LiveMandu
धर्मनिरपेक्षता विदेशीको चाल : कमल थापा
राप्रपा नेपाल देश दौडाहामा छ । कमल थापा हिजो रुपन्देहीमा भाषण गर्दै गर्दा धर्मनिरपेक्षताको पोको खोल्दै कुरा गर्दैथिए । मेची महाकाली स्वाधिन यात्रामा बुटवलमा हिजोको आमसभामा कमल थापा अब नेपालमा हिन्दु राष्ट्रको माग गरिनुपर्ने कुरामा जोड लगाँउदै थिए । तथापि इतिहास फर्केर हेर्दा राजा शाषन र त्यसपछिको सरकारमा पनि कलम थापा लामै समय ठूलै मन्त्रिपदमा बिराजमान भएको देखिन्छ । उतिवेलाको चेत नखुलेको कमलको चेत अब खुलेकै हो त ? आमसभाका सहभागीहरु खासखुस गर्दैथिए ।
जनआन्दोलनका म्यान्डेडमा धर्मनिरपेक्षता नरहेको कमल थापा को भनाई थियो तथापि जनआन्दोलन अघि र पछिको सरकारमा पनि निर्णायक भूमिकामा रहेका कमल त्यतिबेला चाँही किन चुप थिए त ? सबैको प्रश्न त्यही थियो ।
कमल थापाले वर्तमान सरकारको सिके राउतसंगको संझौतामाथि पनि कटाक्ष प्रहार गरे । राजसंस्था हटेपछि नेपालमा झनै असहज परिस्थिती भएको र झनै लुटतन्त्र मौलाएको उन्को विष्लेषण थियो तथापी सहभागीहरुले उनको भाषण र कुरामा खासै चासो नदिएको र आमसभामै पनि निकै विवाद र टिप्पणीहरु उठेको हाम्रो बुटवल संवाददाताले बताए । अहिले नेपालमा राप्रपा नेपाल र बाबुराम भट्टराईको नया शक्ति पार्टी निकै देश दौडाहा र भेलामा कन्द्रित पाइन्छ ।
Tags: कमल थापाधर्मनिरपेक्षताराप्रपा नेपाल
Seven Days Seven Features All New Features of Hamro Patro
प्रियंका चोपडाद्धारा निर्मित नेपाली चलचित्र पाहुनाको ट्रेलर सार्वजनिक
ओसामा विन लादेनका ६ पत्नी र ३० छोराछोरीको जिवन